६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसः यस्तो देखियो टुँडीखेलको विशेष कार्यक्रम | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसः यस्तो देखियो टुँडीखेलको विशेष कार्यक्रम
६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसः यस्तो देखियो टुँडीखेलको विशेष कार्यक्रम
फागुन ७, काठमाडौं (अस) । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सोमवार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ६८ औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ । जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सहभागी छन् । कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी, परेड र खेल कौशल प्रदर्शन गरिएको छ ।
यसैगरी देशका अन्य भागहरुमा पनि सभा, र्‍यालीलगायतका विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ ।
प्रदेश नं. ५ बुटवलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायत ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा सोमवार निकालिएको र्‍याली ।
दिवसको अवसरमा सोमवार सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । गणतन्त्र स्थापना दिवस प्रजातन्त्र दिवस मनाउन छाडिए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भने सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
एकसय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध चर्किएको आन्दोलनपछि तत्कालीन शासकले जनतासमक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र नेपाली काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भएको थियो ।